Dubai bụ ebe kachasị mma maka ọrụ, otu esi achọta ọrụ
Gịnị kpatara Dubai bụ ebe kacha mma maka ọrụ? 🥇
Ịnabata ọrụ na 2018 Dubai City 🥇
Ugbu a anyị na-achọ ọrụ na Dubai na Abu Dhabi 🥇
Dubai bụ ebe kacha mma maka ọrụ?
Dubai bụ ebe kachasị mma maka ọrụ ?. Gịnị kpatara nke ahụ ji mee? Iji kwu eziokwu, Dubai bụ otu n'ime ebe kachasị mma n'ụwa. Ajuju ajuju ajuju, umu nkita o bula na acho ibanye na Dubai. Na elu ọrụ ahụ na UAE bụ ụzọ dị mma maka ụgwọ akwụghị ụtụ isi ọ bụla. Mana iji nweta ọrụ ahụ na Emirates. Ikwesiri inwe ebe a Ịchọta ọrụ ịchọta ndụmọdụ gbasara ụlọ ahịa Dubai na ụzọ maka ahịa onwe gị nduzi zuru ezu.
Dubai bụkwa ebe azụmaahịa dị. Enwere ọtụtụ ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị, Ndị otu ezinụlọ, na ndị nwere azụmahịa. Ebe a dị ịtụnanya kachasị na ya kachasị mma obodo a na-eme maka obodo maka ndị mba ọzọ. N’aka nke ọzọ, a matawo obodo Dubai dị ka obodo kachasị mma maka ndị na-achọ ọrụ mba ofesi. Maka ebumnuche nke ndụ na ụwa Arab, ebe a bụ otu n'ime ihe kachasị mma na usoro ọkachamara na ndụ onwe ya. N'ime etiti azụmaahịa Emirates, ị nwere ike nweta ọrụ dị ịtụnanya na-enye n'aka ndị na-akpọ ọrụ.
Dubai bụ ebe kasị mma maka ọrụ na Emirates?
Dịka ihe omuma atu nke oma. Ebe a buru 5 nke obodo ndi ama ama n’uwa n’uwa. Isi ihe ọzọ bụ obodo a ngwa ngwa ibu ebe a kacha eleta n'ihi na ndị isi kachasị mma ịrụ ọrụ. Itinye ya n’ụzọ ọzọ kama aga na ịchọta ọrụ n'ọtụtụ ebe siri ike dị ka Singapore, London, na Paris. Ọbụlagodi na ọnụ ọgụgụ dị elu maka njem na ọnụ na New York, Hong Kong, Doha, Mumbai.
Na 2018 Dubai ogo enweghi ike imeri ya uto aku na uba na azumahia ohuru. N’otu aka ahụ dịkwa mkpa bụ ịma mma maka ndị mba ụwa niile. Site n'otu akaebe a, nke a obodo bụ ebe nrọ maka ọrụ ọhụrụ àgwà na usoro nke ndụ na ụgwọ nke ndụ. Maka ọrụ na UAE. Ụlọ ọrụ anyị na-adụ a nyocha oru nyocha na Dubai na nchịkọta ụlọ ọrụ mpaghara. Ha bara uru ka itinye ha na CV gị.
Kedu ihe kpatara Dubai ji bụrụ ebe kachasị mma maka ọrụ dị ka onye njikwa. N'ihi na ị nwere ike nweta ọrụ ọsọ ọsọ!.
Obodo dị na United Arab Emirates
Nke mbụ, obodo kachasị mma nke obodo UAE dị ọhụrụ gụsịrị akwụkwọ na ndị ọhụrụ ọpụpụ na 2018. N'ezie, Abu Dhabi bụ ebe dị mma maka ọrụ na njikwa, Dubai, na Sharjah na-aghọkwa ndị kasị elu n'etiti obodo kachasị mma ibi na Arabic Business World.
Na 2018 na 2019 na nyocha ọhụrụ maka ndị na-achọtara onwe ha bụ ndị Dubai. Na n'okpuru ọnọdụ ndị ahụ mgbe ị na-achọ ezigbo ohere ọrụ na njikwa. Ị kwesịrị were obodo a dịka obodo kachasị mma n'ụwa. Ndị isi oche na ndị isi Chef Executive Officers na-enweta ọrụ ndị ka mma. N'okwu ahụ ọ ga - eme ka ohere ọrụ dị mma maka ọkwa nchịkwa dị elu, ndị isi ọkwa ọkwa ga- nweta ndu ka odi nma karie na ụgwọ ọnwa kachasị mma na nke asọmpi tụnyere ndị ọzọ.
N'ime otu afọ, nnukwu ọrụ na-achọ ọrụ na mmanụ na gas. The ọkachamara ọrụ ndị na-abịa Dubai dị ka ebe ọrụ kachasị amasị n'ụwa. Maka ha inweta ọrụ na Abu Dhabi ma ọ bụ Dubai bụ ihe kachasị mma na ọrụ ọrụ.
N'aka nke ọzọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ndị na-achọ ọrụ site na India na-achọ kwa ụbọchị maka ohere 8,000 mmanụ na gas. Karịa ndị ọkachamara niile dị na Dubai kwesịrị ịzaghachi onye ọ bụla na-ahụ maka ndị ọrụ. N'iburu nke a n'uche na-achọ mgbe niile maka ebe nrụọrụ weebụ n'ịntanetị maka ịkụzi ozi ọrụ banyere ọrụ. Ngwá ọrụ kachasị mma na-etinye ndị ọrụ nchịkọta mmadụ na Dubai n'elu nchịkọta ọrụ ha.
Ebe nkiri na Dubai
Obodo kacha mma na ụwa ghọọ Dubai na United Arab Emirates. Ebe kachasị mma maka ndị ọbịa na ezumike na ebe dị ọkụ maka ọrụ. Enwere ya mere, ọtụtụ ebe n'obodo. Dika odi, ndi obia ohuru huru ebe a n'anya n'ihi ebe di elu na ulo ahia. Mana iji nweta ọrụ na Dubai ịkwesịrị ịnweta visa na-arụ ọrụ. N'akụkụ na-adịghị mma, ị ga-achọ ịma otu esi achọta ọrụ.
The Ọchịchị Dubai agbanweela mpaghara dum site na obere Gọọmentị gaa na nnukwu ụlọ ọrụ. Dubai akwagala site n’ọzara rue n’otu n’ime obodo kachasị mma na mbara ala. Ọtụtụ ebe nkiri na ebe a na-eweta ọtụtụ na ndị ọzọ ndị ọbịa na UAE. Ọ bụghị naanị na ị nwere ike ịba ụsọ n'oké osimiri ma ị nwere ike ịchọ ahịa ahịa.
Nile gburugburu na Emirates, ọ bụ ezigbo mma. N'otu oge ahụ, UAE bụ ebe kacha mma maka ntụrụndụ ezinụlọ. Isi obodo nke UAE bụ ebe a ma ama maka ndị ọgbọ. Ndị mmadụ hụrụ ebe a maka ebe nkiri dịka Burj Khalifa. Nke a bụ eze ụwa kachasị elu na GCC. Ma ọbụna karịa, ebe nwere ike ịdị mkpa maka ezinụlọ gị. Dịka ọmụmaatụ ama ama Dubai ịzụ ahịa ụlọ ahịa.
Anyị ọmarịcha Dubai na-abịa zuru ezu maka onye ọ bụla. You nwere ike ịhọrọ ọtụtụ ebe nkiri site na mammoth aquariums na ime mmiri slopes slopes. N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, obodo a nwere ọtụtụ ihe ngosi ọdịnala maka ndị ọbịa na ndị dinta ọrụ. E nwere ọtụtụ ihe ị ga-eme n'akụkụ nile nke Emirates. Ụgbọala ndị dị na ebe a bụ ihe kachasị mma ma nwekwuo gbakwunye oge.
Dubai bụ ebe kachasị mma maka ọrụ, gbalịa inweta ọrụ dị ka onye na-eme njem.
Ụlọ ọrụ Emirates kwadoro ndị ọpụpụ na Dubai na ịchọta ọrụ. Ndị na-eme njem na Emirates ha ga-achọ ịnata ma jiri ego mmanụ ha baa n'ime Dubai dị ịtụnanya na Abu Dhabi. A na - anabatakarị ndị ọrụ talent ụwa na Emirates. Ụlọ ọrụ dị iche iche na ụlọ ọrụ Dubai na Singapore, New York, na London Human Resource Capital Companies.
Ulo oru ndi isi ochichi dika Adecco, Bayt na GulfTalent na otutu ndi ozo. Achịkwala UAE n'ihu mba ndị ọzọ maka ebumnuche mbanye. Na ọrụ kachasị mma bụ ndị ọrụ mmanụ. N'ihi nke a, akụnụba dị na mba Gulf na Middle East dị ka mba No1 na-adọta ndị nchịkwa ọhụrụ. Onye kachasị mma na-achọ ụlọ ọrụ na UAE. Na n'ebe ị nwere ike nweta ọrụ zuru ụwa ọnụ dịka nwanyị.
Na-ekwukarị ụfọdụ ndị na-achọ ọrụ ọ nwere ike iju anya. Ọ bụghị naanị nke ahụ A họọrọ Dubai dị ka ebe kachasị mma iji rụọ ọrụ na UAE. Expats too rating nke oma maka Shariah na Abu Dhabi. Achọkwara ọrụ zuru ụwa ọnụ mgbe ị biri na Emirates ụlọ ọrụ na Saudi Arabia.
N'ikpeazụ, ndị ọchụnta ego azụmahịa na Dubai na ndị na-eme mkpebi na-eme mkpebi bụ ndị isi na usoro nke njikwa akụ na ụba mmadụ. Maka ọrụ kachasị anya, ndị na-achọ na-aghọta ike nke mba a. Ndị ọrụ nchịkọta na-eduga ọtụtụ ndị mba ọzọ ịhọrọ Dubai na Abu Dhabi dị ka ebe ha ga-ebi, rụọ ọrụ ma nwee obi ụtọ na ndụ ha na ụwa azụmahịa Arab.
Kedu ihe kpatara Dubai ji bụrụ ebe kachasị mma maka ọrụ? N'ihi na ọtụtụ ndị Expats na-enweta ọrụ ebe ahụ.
Ndụmọdụ maka ịchọta ọrụ na UAE
N'okpuru ọnọdụ ndị ahụ na-achọ ọrụ kama na saịtị saịtị. Ugbu a ị na-ahọrọ ebe nrụọrụ weebụ akwụ ụgwọ. N'ihi na ọ bụrụ na mmadụ na-arụ ọrụ na Dubai maka ihe karịrị 10 afọ. O nwere ohere inweta ọrụ n'ahịa ahia nke Emirates. Ọ bụghị ihe ijuanya na ha n'ezie ịchọta ọrụ na UAE dị ka ndị agha Pakistani. Ọbụna ọnọdụ ọrụ dịka CEO na Director Director (MG). Ma ọ bụ òtù MBC na President nke Òtù Alumni nke Insead na UAE.
Maka ọrụ kachasị anya, ndị na-achọ ha kere ọnụ ọgụgụ buru ibu nke ndị ọrụ ruru eru. Na ha na-abịa ịrụ ọrụ na UAE kwa afọ. N'otu oge ahụ, ọtụtụ ndị na-achọ ọrụ na India bụ ịnọ na oge ka ukwuu na Emirates. Obi uto nke ahia injinia na-akpọbata ọtụtụ mmadụ kwa afọ. Dubai City na-eme ohere nile maka ndị isi ala ụwa. Nke a dị ịtụnanya obodo Arab na-eme ka a gbara ọkpụrụkpụ nke ọrụ dị ịtụnanya na ụdị ndụ ọhụụ na nguzozi maka ọtụtụ mmadụ.
Na Emirates, dị ka a na-ekwukarị, enwere ọtụtụ ohere mara mma na 2020. Ọrụ dị na Dubai ghọrọ ndị ama ama na iwulite ọtụtụ ụlọ ọrụ na Resume gị. Ikwesiri inwe bidoro site na ahụmihe di elu n'ime UAE. Lọ ọrụ kachasị mma ebe a na Dubai bụ ụlọ ọrụ mba ụwa. Ebe ị nwere ike guzobe oge ogologo oge na Middle East.
Yousuf Almulla onye isi Strategy Officer na Dubai Holding, Isi onye na Azụmaahịa Dubai onye bu onye mba UAE na ndi EMBA. Na-ekwu mgbe niile na ajụjụ ọnụ ha banyere nsonaazụ nke UAE expats. Ọrụ UAE na-akwụ ụgwọ maka ndi isi na ndi isi n’iru. UAE bụ mba maka ndị na-achọ ọrụ mba na ndị na-achụ nta ọrụ nke ndị ọbịa n'obodo ọzọ. Ndị obodo mgbe niile na-ebili ịnata ụdị otuto ahụ.
Ọrụ na Dubai adịghị mfe ịchọta
Dịka eziokwu, ụlọ ọrụ Dubai City Company na-ekpebi ọrụ pụrụ iche maka ehihie. N'aka nke ọzọ, anyị bụ enyere ndị na-achọ ọrụ na mba Gulf dịka Qatar na Saudi Arabia. Kemgbe 2009 anyị na-ejikwa ngwa ndị ọrụ na-achọ ọrụ. Na olile anya nke ahụ ndị si mba ọzọ na - achọ ọrụ ga - achọta ọrụ ọhụrụ na Qatar ma ọ bụ Saudi Arabia.
N'aka nke ọzọ, ụlọ ọrụ Dubai City Company na-aghọ ngwa ngwa ọrụ kacha mma Nne na-arụ ọrụ ọrụ N1 na UAE. Ya mere, onye ọ bụla na-achọ ọrụ nwere ike bulite CV maka Dubai ọrụ. Ohaneze na-arụ ọrụ na Middle East. Na na onye ọ bụla maara. Ma site na atụmatụ atụmatụ Social Media anyị, ọ ga-adị mfe iji nweta. Mgbe ị malite ahịa onwe gi n'ahịa ahia UAE ị nwere ike ịchọta ọrụ na Dubai City.
N'otu oge ahụ, ọtụtụ ndị na-achọ ọrụ na-ebugote CV gaa na weebụsaịtị anyị na ahụmahụ MBA. Na nke a, chọtara ọrụ na Dubai. Ọ dị mkpa ịghọta ma ọ bụrụ na ị na-achọ inweta ọrụ na UAE. Jiri ọrụ anyị ma nweta ọrụ ngwa ngwa biko jiri ngalaba ebidopụta ebugote anyị. N'elu akụkụ dị mma ma ọ bụrụ na ị na-achọ ọrụ nchịkwa. Anyị na-enye ọrụ nyocha kachasị mma na UAE. Ikwesiri ibufe akwukwo nso nye onye nnọchite anya anyi na Dubai City Company.
Gịnị mere Dubai bụ ebe kachasị mma maka ọrụ na njem ọhụụ?. N'ihi na ndị mmadụ na-ahụ maka ọrụ na UAE.
Bulite Resume maka Ọrụ na Dubai
Citylọ ọrụ Dubai City na-enyere ndị na-achọ ọrụ aka ọ bụghị naanị na UAE. Anyị na-enyere aka inweta ọrụ na Qatar, Saudi Arabia, na Egypt. N'akụkụ aka nke ọzọ, anyị bụ otu n'ime saịtị ọrụ kachasị mma na Middle East. N'iburu nke a n'uche, ndị na-achọ ọrụ nwere ike ibubata ịmaliteghachi na ụlọ ọrụ Dubai City. Ndi otu anyi ijikwa ngwa ọrụ n'ime ụlọ. Onye ọ bụla na-achọ ọrụ nwere ike ịdenye Usoro Ọmụmụ Vitae. Karịsịa ụlọ ọrụ nchịkwa maka ndị India. Ndị ọrụ ụlọ ọrụ anyị na-achọta ọrụ na Dubai na Abu Dhabi. Ga-arụ ọrụ nke ọma maka gị.
N'elu nke a, onye ọ bụla na-achọ ọrụ si India na Pakistan na-enyeghachi Resume. A ga-enwe nhọrọ ole na ole ịhọrọ. Ndị njem si n'ahịa ahịa ụwa nwere ike idobe usoro ọmụmụ ha. Thezọ kachasị mma bụ bulite CV na ndị na-ewe ndị ọrụ na ụlọ ọrụ HR. Smartzọ amamihe dị na ya bụ ịnweta nhọrọ ebugote ego ma chọta ọrụ na UAE. Maka gị, dịka onye na-achụ nta na onye na-achụ nta bụ ezigbo ụzọ dị mma maka nyocha ndụ ọhụụ.
N'okpuru ọnọdụ ndị ahụ, ihe àmà nke Dubai City Company nyere. Onye ọ bụla na-achọ ọrụ nwere ike inweta ọrụ a kwụrụ ụgwọ na Abu Dhabi. N'ihi nke a, ndị na-achọ ọrụ na-asụkarị okwu nwere ike ịchọta ọrụ site na iji ụlọ ahịa Dubai City Company.
Kedu ihe kpatara Dubai ji bụrụ ebe kachasị mma maka oru na oru gi?. Ndị isi na-ahụ maka ọrụ ịkwụ ụgwọ dị elu na UAE.
Ndị India na Pakistani na-achọ ọrụ
Nzukọ anyị na-enyere ndị na-achọ ọrụ aka karịsịa site na India na Pakistan. Onye ọ bụla ọ bụla debanyere akwụkwọ ọrụ ha. N'ezie, nata a ihe nyocha oru. Ya mere site na nke ahụ, ha ga - enwe ike ijikọ na ụlọ ọrụ ndị na - ewe ndị ọrụ, ndị isi, ndị na - ahụ maka njikwa na Dubai, Abu Dhabi, Saudi Arabia, Qatar, Jordan, na Egypt. Ọzọkwa lee anya na ntuziaka njem na United Arab Emirates.
Dubai City Company bụ ụlọ ọrụ kachasị mma na United Arab Emirates. Iji tinye ya n'ụzọ ọzọ, anyị bụ enyere onye ọ bụla na-achụ nta ego na ọrụ ọchụ nta aka site n'inye ha na UAE. Na-elebara ndị mba ụwa anya ga-achọ gafee maka ọrụ ego. Gịnị kpatara Dubai bụ ebe kachasị mma maka ọrụ dịka ndị India na Pakistani? Ndị mmadụ na-enweta visa maka ọrụ na UAE. N'ụzọ dị nnọọ ngwa ngwa.
N'akụkụ aka nke ọzọ, ị ga-echekwa na Dubai. Ndị uwe ojii bụ ihe ịtụnanya na Dubai na Abu Dhabi.
Ya mere ọ bụrụ na ị na-achọ ọrụ na Dubai?
Dubai bụ ebe kachasị mma maka ịrụ ọrụ dịka onye ọhụụ? Ndị na-achọ Job na-achọta ọrụ na UAE.
Ugbu a ị nwere ihe niile ozi banyere ndu na UAE. Should kwesịrị ị na-anwale anyị ọrụ nyocha ọrụ maka ụlọ nkwari akụ ahụ. Ụlọ ọrụ anyị dị na Dubai bụ nzukọ dị mma nke na-akwụwa aka ọtọ. Anyị na-enyere aka inweta ọrụ na ụlọ ọrụ Dubai ma nweta ọrụ ngwa ngwa n'ime United Arab Emirates.
Nke ahụ bụ ikwu, anyị bụ otu n’ime kacha enye ihe omuma banyere ndu ndu na Dubai na 2019 ma nwee olile anya ụlọ ọrụ kacha mma n'ọdịnihu 2020. Ndị otu anyị na-eme nyocha maka akụkọ kachasị ọhụrụ na ịdebanye ya na Blog anyị na Dubai. Isi okwu ọzọ ma ọ bụrụ na ị na-achọ ọrụ ahụ ma ị na-ewepu ya kwesịrị bulite nzaghachi na ụlọ ọrụ kacha elu bụ onye nọ na Dubai City.
Dubai City Company bụ ụlọ ọrụ kachasị mma maka ndị na-achọgharị ọrụ. Ya mere ọ bụrụ na ị nwere ahụmahụ na azụmahịa dị ka C-Ọkwa anyị nwere ike nye gị ịtụnanya ọrụ ohere na Dubai. Ọrụ anyị na-elekọta ọrụ na-achọ ndị nlekọta isi n'ime na n'èzí Dubai maka ndị isi nchịkwa.
Onye ọ bụla na-achọ ọrụ kwesịrị tụlee Dubai City maka ọrụ ọhụrụ. Emirates bụ ebe kachasị mma maka ndị na-eme njem maka ọrụ IT na Google. Dubai bụ ebe kachasị mma maka ọrụ Bunye CV gị na ụlọ ọrụ anyị.
Dubai bụ ebe kachasị mma maka ọrụ dị ka onye na-agafe
Chọta ọrụ na Dubai City!
Ịnakọta maka ọrụ na UAE
Chọta a Ozi ndị ọzọ gbasara Dubai? ihe ijuanya na ị nwere ike ịnweta ya. Naanị ịmalite ọhụrụ ọrụ na Dubai!
Bulite Na-amalite gaa Obodo Na-arịwanye Elu Na Ụwa! - Dubai City.